Cudurka covid ee dheer – sheekada Shereen | Mental Health Foundation
Cudurka covid ee dheer – sheekada Shereen
Cudurka safmarku waxuu dadkoo dhan geliyey caqabad, hase yeeshee qaar farabadan oo naga mid ah ayaa ku rajo qabi kara mustaqbalka inta la dabcinayo xadaymaha xiritaanka waddanka ayna sii badanayaan dadka tallaalan. Hase yeeshee, dadka uu taabtay cudurka covid ee dheer (long covid) iftiinka ka muuqda godka dhammaadkiisa ayaa ugu eekaan kara mid aad uga sii fog.
Marka la raaco xogta xafiiska ONS, bishii Maarso 2021 in ka badan hal milyan oo qof ayaa Ingiriiska ku qabay saamaynta ama dhibaatooyinka cudurka covid ee dheer. Inkastoo calaamadaha cudurku ay kaladuwanaan karaan, haddana waxay qaar farabadan ku tilmaamaan in aanay caadi ahaan kala go'in waxaana ka mid ah neeftuurid, qufac joogto ah, xanuunka laabta, daal dabadheeraad ah, xanuunka muruqyada, diidista cuntada, luminta dareenka dhadhanka iyo urta, iyo jahwareer.
Maamulidda calaamadaha cudurka covid ee dheer ee jirka ka muuqda ayaa laftigeedu iska adag laakiin saamaynta caafimaadka maskaxda ayaa sidaas uun u daran, waxaana siiba adkaysa aqoonta iyo fahanka gaaban ee laga haysto xaaladda caafimaad.
Shereen, 38 jir, oo ka soo jeedda Glasgow ayaa markii ugu horraysay la kulantay cudurka koronafayrus ee daran bishii Maarso 2020 taasoo ay ugu baahatay daryeelka isbitaalka.
Shereen: "Aad ayaan u bukay, waxaan dareensanaa in aan dhimanayo. Markii aan isbitaalka tagay si la ii baaro, waxaa la i geliyey qol sugitaan oo ay joogeen dad kaloo farabadan oo loogu tuhunsanaa cudurka Covid. Waxaan xasuustaa anigoo ku fikiraya haddii aanan hore u qabin, in aan halkan ka qaadi doono oo aan kala bixi doono. Markii aan takhtarka arkay, iyadu ma xirnayn qalabka PPE ee jirka lagu badbaadiyo aad ayaanan iyada ugu walwal qabay waxaana ka baqayey in aan anigu iyada qaadsiin doono. Fikirkaas ayaa taas ka dib toddobaadyo maskaxdayda dhex wareegayey.”
Iyadoo cudurka lagu sheegay waqtigii ka horreeyey baaritaanka caadiga ah, waxaa Shereen loo diray gurigeeda dabaqa ah ee ku yaalla bartamaha magaalada oo ay keligeed deggan tahay.
Halkaas ayay hadalka ka sii wadday: “Calaamadaha cudurka Covid waa sakaraad. Anigu caadi ahaan waxaan ahay qof aad iskugu filan oo karti leh laakiin waxaan dareemay in aan soo galay dhul dagaal ka socdo. Ka sokow xanuunka jirka, waxaan dareensanaa in sun igu jirto. Waxaan aad ugu feejignaa halista cudur qaadsiinta dadka kale waxaanan hubiyey in aan go'doon galo, anigoo xataa bac ku daboolay daloolka waraaqaha laga soo rido. Ka dib jirradaydii ama xanuunkaygii ugu horreeyey, waxaan rajaynayey in aan ka soo bogsado, laakiin marar kale ayaan dib ugu gurtay oo aan ku noqday intii taas ka dambaysay. Markii ugu horraysay waxay ahayd qiyaas ahaan saddex toddobaad ka dib. Waxaan dareemay in qolofta laga gooyey nabar ku yaallay sanbabbadayda; waxaan dareemay in ay gubanayaan. Xataa markaas, waxay igu qaadatay lix bilood si aan dib ugu noqdo isla isbitaalkii aan tagay markii ugu horraysay ee aan qabay cudurka Covid si aan u booqdo kiliniigga ama rugta caafimaadka neefsashada. Aad ayaan uga walwal qabay dib ugu noqoshada halkaas, waxaanan ka qaaday argagax.”
Inkastoo ay Shereen weli dareento saamaynta cudurka covid ee dheer, haddana waxaa sidii hore uga yaraaday mararka ay dib u gurasho ku dhacdo. Hase yeeshee, nolosheeda iminka ayaa aad uga waxqabad yar sidii hore maxaa yeelay waxay dareentaa dhacsaal iyo daal. Ma socon karto in ka badan labaatan daqiiqo mana hadli karto waqti dheer iyadoo aanan horta qorshaysanin nasasho ku filan si ay iskaga ilaaliso in ay gebi ahaan itaal beesho. Waxay weli ku nooshahay xanuunka muruqyada iyo kalagoysyada jirka, taasoo ay u qaadato labo daawo oo loogu talagalay xanuunka dareemeyaasha jirka waxayna aragtaa dabiibaha dhaqdhaqaaqa jirka (physiotherapist).
Ka hor intii aanay ku bukoon cudurka Covid, Shereen waxay ahayd heesaa waxayna weliba diyaar u ahayd in ay bilowdo ganacsi cusub oo ay ku iibiso keegagga waraaqaya yar yar ku jira. Waxaa khasab ku noqotay in ay labadaasba hakiso waqti aanay ogayn iminkana shaqo ma hayso.
Waxay Shereen tiri: “Inta aan ku noolahay xaaladdan caafimaad ee aanan kala go'ayn, sidaydii ma dareensani. Waxaan moodaa in wax walba ay meel kaga dhacaan sida aan isku arko waxaanan marwalba dareensan ahay in aan sidii hore ka duwan ahay. Waa wax aad iigu adag in aan aqbalo maxaa yeelay ma garanayo haddii aan weligay dareen caadi ah dib u yeelan doono. Shucuurtaada ayay taasi aad u taabataa maxaa yeelay waxaad rabtaa uun in aad roonaato, waxaanan marwalba ka walwal qabaa dib u gurashada kalee iman karta maxaa yeelay waxaan badi is iraahdaa ‘waxan dib uma qaadi karo’."
“Bishii August waxaan doontay caqlicelin ama latalin maxaa yeelay waxaan ogaa in wax iga qaldan yahay. Waxaa si joogto ah iigu jiray dareen aad u daran, sidii in aan dib u marayo sakaraadkii markii aan bukay. Caqlicelinta ayaa i caawisa. Anigu caadi ahaan si aad u furan uma sheegto shucuurtayda, xataa naftayda uma sheego, laakiin cudurka Covid ayaa gudahayga qarax ka dhaliyey markaa waxaanan wax ii tarayn nidaamyada aan caadi ahaan wax ugu adkaysto aanan kaga gudbo. Lataliyaha caqlicelinta ayaa aniga ila sameeya leyliyo kaladuwan si aan u garto dareennadayda iyo sida aan kuwaas naftayda ula xiriiriyo. Tusaale ahaan, farsamooyinka kala goynta sida i weydiinta in aan dareenka u sharxo midab sidiisa."
"Caqlicelinta ayaa i caawisa.. Anigu caadi ahaan si aad u furan uma sheegto shucuurtayda, xataa naftayda uma sheego, laakiin cudurka Covid ayaa gudahayga qarax ka dhaliyey markaa waxaanan wax ii tarayn nidaamyada aan caadi ahaan wax ugu adkaysto aanan kaga gudbo."
"Waxaan anigu ubur ama koox xiriir kula jiraa qof aan saaxiibbo nahay, oo kalkaaliso ah, iyo qoyskeeda, laakiin waxaan iyaga arkay oo keliya afar jeer sanadkii ugu dambeeyey. Waxaan weliba saaxiibbadayda isku waraysannaa wicista fiidiyowga leh, laakiin waa in aan hubiyo in aan si fiican u nasto oo aan tamar iyo itaal u hayo. Taas ka sokow, sheekada aan la galo dadka ku jira Kooxda Covid Dheer ee Facebook ayaa aad ii caawisay. Waxaa aad u fiican in aad la hadasho dad si dhab ah u fahansan waxa ku haysta ee aad dhex marayso oo aad fikrado wadaagtaan. Taas awgeed ayaan weliba u aasaasay koox Facebook oo khaas ah oo si joogto ah loogu wada kulmo si looga hadlo wax walba – nolosha, calaamadaha cudurka, rajooyinka loo qabo mustaqbalka. Waxaan ogaa in ay jiraan dad ay ku adag tahay in ay xaaladda u adkaystaan markaa waxaan rabay in dadkoo dhani ay dareemaan in aanay keli ahayn. Waxaan dhammaanteen isku garab siinnaa hab laga yaabo in saaxiibbadeena iyo qaraabadeennu aanay awoodi karin."
“Waxyaabaha kalee aan soo sameeyey si aan ugu faa'iideeyo caafimaadkayga maskaxdu waa jimicsiga yin yoga, khilaawada, haysashada xasuusqorka niyadda, iyo qoraallada hal abuurka leh. Hase ahaatee, gacantayda bidix ayaa u muuqata in aanay shaqaynayn waxaanan anigu ahay bidixle markaa waxaa khasab igu noqotay in aan gacantayda midig wax ku qoro.”
Marka mustaqbalka la eego, waxay Shereen ku rajo qabtaa in ay dhawaan tallaalka heli doonto kaasoo, dadka qaba cudurka covid ee dheer qaarkood, ka caawiyey in ay ka yaraadaan calamaadaha cudurku.
Waxaa si adag iskugu xiran caafimaadka jirka iyo caafimaadka maskaxda. Marka dadku ay ku nool yihiin xaaladaha caafimaadka jirka ee waqti dheer, waxaa siyaado loogu filan karaa in ay yeeshaan caafimaadka maskaxda ee liita.
Waxaa jira habab aad ku dhawri karto wanaagqabkaaga maskaxda:
1. Si deggan u soco: siyaado ha isku daalin ama cadaadis xad dhaaf ah ha is saarin. Ku soco xawaaraha ama tallaabada adiga kugu habboon, dadka kale ha ka maqlin marka ay isku dayaan in ay kugu cadaadiyaan in aad samayso wax aadan qaadi karin.
2. Xiriirka ilaali: inta aad awoodi karto, isku day in aad bannayso waqti aad xiriirka la waddo dadka aad isku dhowdihiin. Dadka aad aaminayso kala hadal waxa aad dareensan tahay. Kooxaha internetka ayaa weliba fursad ka bixiya in taageero laga helo dadka soo maray waayo ama dhacdooyin la siman.
3. Waqti ku qaado goobaha dabiiciga ah: haddii aad dibadda u bixi karto, xiriirka lala yeesho dhulka dabiiciga ah ayaa faa'iidooyin ballaaran u keeni kara caafimaadkaaga maskaxda. Haddii aadan meel fog u safri karin, waxaa weliba faa'iido kuu yeelan karta daryeelidda beerta ama dhirta guriga lagu haysto.
4. Isku tijaabi farsamooyinka is dabcinta ama khilaawada loogu fiirsado waqtiga xaadirka ah: Waxuu adeegga NHS internetka ku hayaa dhowr leyli ama jimicsi oo la isku dabciyo oo hagis leh oo kaa caawin kara in aad dejiso jirkaaga iyo maankaaga.
Waxaa hagis dheeraad ah laga heli karaa xaruntayada dhexe ee cudurka covid.